Jowhar.com : Somali Leader News - News: Ciyaaryahan Soomaali ah oo garoonkii uu kubbada ku ciyaari jiray hadda ku ah maxbuus
April 16 2014 16:59:40
Ciyaaryahan Soomaali ah oo garoonkii uu kubbada ku ciyaari jiray hadda ku ah maxbuus
Ciyaaryahan Soomaaliyeed oo u ciyaara kooxda ka dhisan dalka Kenya ee AFC leopards Sadiq Abdulqader Mohamoud ayaa ka mid ah dadka Soomaalida ah ee ku jira garoonka kubbada cagta ee Kasarani magaalada Nairobi.
Weeraryahanka Leopards Sadiq ayaa xilli habeenimo la soo qabtay isagoo ku sii jeeda guriga uu ka degen yahay Nairobi kadib markii uu soo daawaday kulan ka mid ahaa ciyaarihii Championka.
Xiriirka kubbada cagta Soomaaliyeed ayaa si xoog leh u cambaareeyay xariga loo geystay mid kamid ah xiddigaha Oceans waxayna ugu baaqeen dowlada Kenya in ay si degdeg ah oo shuruud la�aan ah ku sii daayaan.
�Guud ahaan waan ka xunahay waxa ku dhacaya shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya balse waxaa si weyn noo taabtay ciyaaryahanka Soomaaliyeed ee Sadiiq�ayuu yiri xoghayaha xiriirka kubbada cagta Abdi Qani Said shir jaraa�id oo uu qabtay.
Sadiq ayaa ka mid ahaa xulka qaranka Soomaaliyeed afartii sano ee la soo dhaafay waxaana uu u saftay kulamo badan oo ciyaaro caalami ah. Balse hadda waxa uu u ciyaaraa kooxda kaalinta labaad kaga jirta horyaalka dalka Kenya.
0 Comments · 5068 Reads
Jowhar.com620,488 unique visits